Edhisheni nhau vhiki rino (Nyamavhuvhu 29 - Gunyana 2) | Zvazvino Zvinyorwa
Edhisheni nhau svondo rino (Nyamavhuvhu 29 - Gunyana 2)
Lidia aguilera | | Zvinyorwa, Vanyori
Mangwanani akanaka kune wese munhu! Nyamavhuvhu akauya nenhau shoma kwazvo dzekuSpain, zvisinei hazvo pane zvimwe zvasara pakupera kwemwedzi zvinove izvo zvandiri kuzokuratidza pazasi, kunyangwe vamwe kubva pakutanga kwaGunyana vakapindawo mukati.
1 "Zita rangu ndinonzi Lucy Barton" naElizabeth Strout
2 "Matanhatu eMakungu" naLeigh Bardugo
3 "Kuverengwa kweVakatapwa" naJoko Ogawa
4 "Compass" naMathias Enard
5 "Vasikana" naEmma Cline
6 "Mazuva matatu neupenyu" naPierre Lamaitre
"Zita rangu ndinonzi Lucy Barton" naElizabeth Strout
Edhisheni Duomu - Nyamavhuvhu 29 - 224 mapeji
Vakadzi vaviri vari muchipatara mukamuri vachitaura kwemazuva mashanu neusiku hushanu. Vakadzi vaviri vasina kuonana kwemakore mazhinji asi vane hurukuro inoita kunge inokwanisa kumisa nguva. Mune ino kamuri uye mune ino nguva, ivo vakadzi vaviri chimwe chinhu chekare, chine ngozi uye chakakomba: amai nemwanasikana vanorangarira kudanana kwavanoita.
"Matanhatu eMakungu" naLeigh Bardugo
Yakagadziriswa Hidra - Nyamavhuvhu 29 - 544 mapeji
Leigh Bardugo anodzoka aine yeVadiki Vakwegura inova yakaiswa munyika yeGrisha. Mune ino kesi rondedzero yevatambi vanouya pamwechete kuve mukuru Kaz Brekker, tsotsi genius uyo anofanira kuunganidza boka revanhu vatanhatu vane hunyanzvi hunodiwa kuti vakwanise kupinda nekubuda muI Ice Court, nhare ine chakavanzika chaigona pfutisa muyero wesimba pasirese.
"Kuverengwa kweVakatapwa" naJoko Ogawa
Edhisheni Funambulista - Nyamavhuvhu 30 - 256 mapeji
Munyaya iyi, boka remagandanga rinotora boka revashanyi veJapan vari kune imwe nyika. Sezvo nguva inopfuura, kutaurirana kunotanga kuve kwakaomarara uye kutariswa kwevezvenhau uye neruzhinji pfungwa iri kudzikira, ichibvumira munhu wese kukanganwa vashanyi vakapambwa. Kwemakore, mamwe marekodhi akawanikwa achiratidza nyaya dzakanyorwa nemumwe neumwe munhu uye ndokuverengera vamwe zvinonzwika.
"Mukati megadziriro yenyaya ino inofamba, anounza kuhupenyu kuburikidza nemanzwi ezvisikwa ayo mumvuri werufu wakarembera, dzakateedzana nyaya, dzimwe ndangariro, dzinomiririra nhaka yeupenyu netariro."
"Compass" naMathias Enard
Random House Literature - Nyamavhuvhu 31 - 480 Mapeji
Muimba yake yeVienna, muimbi wezvemimhanzi Franz Ritter anotanga kuburitsa zvaakararama uye zvaakadzidza apo pfungwa dzake dzese dzichipfuura neIstanbul, Aleppo, Palmyra, Dhamasiko neTehran, nzvimbo dzakaratidza pamberi uye shure muhupenyu hwake. Pakati pezviyeuchidzo zvake zvese, Sarah anomira kunze, mukadzi waakadanana naye makore makumi maviri apfuura uye waakagovana naye yakawanda yenguva dzake huru.
«Enard anobhadhara mutero kune avo vese, vachisiya Levant kana West, vakawira mumatanho emusiyano kusvika pakuzvinyudza mumitauro, tsika kana mimhanzi yavaiwana, dzimwe nguva vachitozvirasa mumuviri nemweya"
"Vasikana" naEmma Cline
Edhisheni Anagrama - Nyamavhuvhu 31 - 344 mapeji
Yakagadzwa muzhizha ra1969 muCalifornia, Evie anoratidzwa, asina kuchengetedzeka uye akasurukirwa wechidiki ari kuda kupinda munyika yevakuru. Evie anosangana neboka revasikana mupaki, vasikana vanopfeka zvisina kutsetseka, vasina shangu uye vanotaridzika vachifara uye vasina hanya. Mazuva mashoma gare gare kune musangano uko mumwe wevasikana anomukoka kuti aende navo. Iyi ndiyo nzira iyo Evie inopinda nayo munyika yezvinodhaka zvepfungwa uye rudo rwemahara, kubata kwepfungwa uye zvebonde izvo zvinokonzeresa kurasikirwa kwekuonana nemhuri yake uye nekunze kwenyika.
"Mazuva matatu neupenyu" naPierre Lamaitre
Edhisheni Salamandra - Gunyana 1 - 224 mapeji
Mazuva matatu uye hupenyu humwe inyaya yakakamurwa kuita nhatu nguva yakakamurwa munguva: 1999, 2011 na2015. Munguva dzino muverengi anokokwa kuti aperekedze Antonie Courtin, murume akave nemhosva yemhosva yake.
Iyi nyaya inotangira mutaundi diki uye rakanyarara uko kutaura kwakashata, huipi uye hunyengeri zvakaunganidzwa kuseri kwezvinangwa zvakanaka, zvinhu zvinozotungamira pakubata uye mhedzisiro yenyaya yaAntonie.
«Kufanirana kwakakwana pakati peyekunyora Lemaitre nemapurisa Lemaitre, Mazuva matatu uye hupenyu hunobatanidza nyaya isingafungiki, uko kunetsekana kusingadzorike chero nguva, nehupfumi hweprozi inotinyudza munyika yemanzwiro akavanzika uye inotikoka kuratidza chiso chakasviba chehupenyu hwevanhu. "
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Zvinyorwa » Edhisheni nhau svondo rino (Nyamavhuvhu 29 - Gunyana 2)
Aya ndiwo mafungidziro avakaita JK vatambi saga raHarry Potter
Pokémon Go inokurudzira Anwendung kuti 'kuvhima' mabhuku